गंगा आमा संग फर्केर आइन चल्यो रुवाबासी,आखिर कस्ले कस्लाई के भन्यो ? (हेर्नुहोस भिडियो) – Dailny NpNews
गंगा आमा संग फर्केर आइन चल्यो रुवाबासी,आखिर कस्ले कस्लाई के भन्यो ? (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १८, २०७८ समय: ११:३८:०९
यो पनि पढ्नुहोस …..नियमित तातोपानी पिउँदा हुन्छन् यस्ता नसोचेका फाइदै फाइदा
आजक’ल धेरै मानि:स कम मात्रामा पानी पिउने गर्दछन् । एक त पा’नीको मात्रा कम त्यसमा पनि तातो पानी नपिउना:ले शरीरमा बिभिन्न प्रकारको समस्याहरु देखा’पर्दछ ।अझ मौसमको परीवर्तन भएसं:ग कतिपयले चि:सो पेय पिउन थालेका छन् । तर चिकित्सक:का अनुसार चिसो भन्दा तातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ । तातो पानी पिउ:नुका फाइदा निम्नानुसार छन् :
-तातो पानीले शरीरको शुद्धि:करण गर्दछ । उमालेको पानी आफै’मा शुद्ध हुने भए:काले यसले शरीर शुद्धिकरणमा सघा’उ पुर्याउँछ ।-पाचन प्रणालीमा गड’बडी हुनेहरुले दैनिक दुइ पटक तातो पानी पिउनाले पाचन प्रणा’लीमा स्वस्थ्य पार्नुका साथै नियमि:त गर्दछ ।
-बिहान उठ्ने बि’त्तिकै तातो पानी पिउँदा शरीरमा ज:म्मा भएका विषाक्त तत्वहरु मुत्रसँगै बा:हिर जान्छन्, यसले पूरै रगत सफा पार्न मद्दत गर्छ ।
कब्जियतबाट छुटकारा पाउन दिनहुँ बिहान तातो पानी पि’उनु लाभदायक हुन्छ ।– बिहान वा खा:ना पछि हरेक पटक एक गि’लास तातो पानीमा कागती वा मह मिसाएर पिएमा मोटोपना नियन्त्रण हुने गर्दछ । घाँटी दुखे वा टन्सिल भए:मा तातो पानीमा नुन मिसा’एर पिउँदा राहत पुग्दछ ।
-तातो पानी’को सेवन गर्दा शरी’रमा तापक्रम बढ्न गई पसिना निस्कन्छ । पसिना निस्कदा शरीरमा बढि भएको नुन बाहि’र निकाल्नुका साथै रगतको शुद्धिक’रणमा सहयोग पूर्याउँछ ।– महिनावारीका सम’यमा पेट दुख्ने स’मस्या कम गर्न तातोपानी उपयोगी हुन्छ । टाउको वा पेट दुखेको बेला तातो पानी पिउँदा राहत पुग्दछ ।तातो पानीमा कागती र मह मिसा’एर सेवन गर्नु उप’योगी हुन्छ ।